स्थानीय तहको निर्वाचनको एक वर्ष ः कर्मचारीलाई दोष दिँदै उम्कँदै जनप्रनितिधी - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
स्थानीय तहको निर्वाचनको एक वर्ष ः कर्मचारीलाई दोष दिँदै उम्कँदै जनप्रनितिधी
Published On : ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १२:३५
गोरखा ः स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । वर्षाैँ सम्म स्थानीय तह जनप्रनिधी विहिन हुँदा बिकास लगायतका गतिविधिमा भएको ढिलासुस्ती जनप्रनिधी आएपछि गति लिने विश्वास लिइएको थियो । गोरखामा पनि दुई नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिकाले जनप्रनीधी चुनिएर आएका छन् । समृद्ध नगर, समृद्ध गाउँपालिका बनाउने नारा घन्काएर चुनाब जितेकाहरुले एक वर्षमा के गरे उल्लेखनिय काम ? गोरखा नगरपालिकाले चुनाबी घोषणा पत्रमा गर्नै नसक्ने कुराहरु उल्लेख नभएको र घोषणा पत्रका साथै जनताको आवश्यकता पहिचान गरी काम गरिरहेको बताएको छ ।
गोरखा नगरपालिकाले जनप्रनिधी आएको एक वर्षको अबधीमा केन्द्रिय सरकारले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास विकास निर्माणको काममा समस्या भएको जनाएको छ । ‘कर्मचारी ब्यवस्थापन नहुँदा वडा कामहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैन जुन हिसाबले हुनुपर्नेहो त्यसो भएको छैन’ गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले भने ‘शाखागत जानुपर्ने कर्मचारी छैनन् । लक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको छ । कर्मचारी नभएर स्थानीय तह पिडित भएका छन् । हामी पनि भएका छौँ ।’ एक वर्षको अबधीमा लक्ष्य अनुसार काम गरेको उनको भनाई छ । ‘एक भित्र के काम गर्ने भनेर हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ’ उनले भने ‘हामीले काम थालेपछि पर्यटनलाई प्राथमिकता राखेका थियौँ । त्यसको पहिलो चरण पार गरिसकेका छौँ । गोरखालाई पर्यटनको हब बनाउन प्रचारप्रसारका साथै भएका पार्कहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने, भीमसेन थापा, लखन थापा र विसे नगर्जीको शालिक बनाउने काम भइरहेको छ । प्याराग्लाइडिङ र रकक्लाईविङको सम्भाब्यता अध्ययनको तयारी गरेका छौँ ।’ नगरपालिका भित्रका सडक स्तरोन्नती गर्ने काम अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै खानेपानीको समस्या भएका वडाहरुमा दातृसंस्थाहरुसँग साझेदारी गरेर अघि बढेको उनको भनाई छ । नगरभित्र रहेका विद्युतका काठेपोल विस्तापित गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष भित्र काठेपोल हटाउने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको पन्तले बताए । यो आर्थिक वर्षको करिब दुई महिना बाँकी रहँदा भौतिक प्रगती ६५ प्रतिशतमा भन्दा धेरै भइसकेको र ९० प्रतिशत हाराहारी भौतिक विकासको काम हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पालुङ्टार नगरपालिकाका प्रमुख दिपकबाबु कँडेलले चुनाबी घोषणा अनुसार नै योजनाहरु बर्गिकरण गरी काम अघि बढाइएको बताए । उनले पालुंटार नगरपालिका भित्र उपभोक्ता समितिहरुबाट हुने विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । त्यस्तै उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिले पनि पालुंटारमा पूर्णता पाएको छ । पालुंटार नगरपालिकाले कानुनी परामर्शदाताहरुको सहयोगमा आवश्यक कानुनहरु बनाएर अघि बढेको प्रमुख कँडेलले बताए । ‘हामीले आवश्यक कानुनहरु बनाएका छौँ’ उनले भने ‘हामी अहिले कानुन पछि नगरपालिका भित्रको भौतिक विकासमा लागेका छौँ । यहाँ पुर्वाधारको खाँचो छ हाम्रो लक्ष्य त्यता छ । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सहयोग गर्ने, स्मार्ट सिटी, प्राविधीक शिक्षालयका साथै जनताको दैनिक जिविकोपार्जनमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ । कार्यकाल भरीमा हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु हामीले पुरा गर्नेछौँ ।’
शहिद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश थापा मगरले सिंह दरबारको अधिकार गाउँमै भन्ने नारा पुरा गर्न नसकेको बताए । ‘मुख्य गरी प्रतिबद्धता गरेका कुुराहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्’ उनले भने ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँमा आउन सकेकै छैन । केन्द्रले कर्मचारी पठाउन सकेन । आवश्यक कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई दिएन । यसले हाम्रो चुनाबी नारा तथा प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न बाधा भएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषयमा हामी दृढ भएरै लागेका छौँ । आफ्नै कार्यालय भवन बनाउने तयारीमा अघि बढेका छौँ । वडा कार्यालयहरुको पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’
अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र धितालले केन्द्रिय सरकारले कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा चुनाबी घोषणाहरु पुरा हुन नसकेको बताए । ‘चुनाबमा सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा मेरो र मेरो टिमको घोषणा थियो’ धितालले भने ‘त्यो पुरा हुने चरणमा छ । गाउँपालिकाको केन्द्र भच्चेक बजारमा हिउँद र बर्खामै गाडी चल्ने बनाउने भन्ने त्यै पनि काम भइरहेकै छ । सबै वडा कार्यालयसँग सडक जोड्ने काम भइरहेको छ । केन्द्रिय सरकारले कर्मचारीले पठाउन नसक्दा हामीले भनेको कुराहरु पुरा हुन सकेका छैनन् ।’ उनले गाउँपालिकाका २ वटा वडामा मात्रै सचिब रहेको समेत बताए । ‘२ वटा वडामा मात्रै सचिब छन्’ उनले भने ‘कर्मचारी अभाव छ । न उताबाट कर्मचारी पठाउँछ । न हामीलाई राख्न दिन्छ यसले समस्या भएको छ । प्राविधिक पनि छैनन् ।’ धितालले पर्यटन विकास र कृषि विकास गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा परेको बताए ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले गाउँपालिकाका १६ वटा सडक नपुगेका गाउँमा सडक पु¥याएको बताए । उनले पनि कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाले गर्ने धेरै कामहरु प्रभावित भएको बताए । ‘कार्यकारी र २ जना अन्य कर्मचारी बाहेक गाउँपालिकाका कर्मचारी छैनन्’ उनले भने ‘पहिलो समस्या नै कर्मचारी नहुनु हो । कार्यकारी अधिकृत र केही प्राविधिक बाहेक अरु छैनन् । जनप्रनितिधीहरुको बलले मात्रै काम भएको छ ।’
सिरान्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङ एक वर्षको अबधीमा गाउँपालिका भित्र भएको विकास निर्माणको काममा आफु सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । ‘विकास निर्माणको काममा हामी ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छौँ’ उनले भने ‘सामाजिक भौतिक संरचनाको काम उपभोक्ता समिती बनाएर, सर्भे गरेर अघि बढेका छौँ ।’ अन्य स्थानीय तहको जस्तै सिरान्चोक गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सास्ती बेहोरेको गुरुङको भनाई छ । ‘चुनाबमा हामीले घोषणा गरेका कुराहरु केही पुरा भएका छन्, केही भएका छैनन, केही हुने चरणमा छन्’ उनी भन्छन् ‘घोषणा गरेका कुरा पुरा हुन नसक्नुको कारण निति निर्माण र कर्मचारी ब्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो । केन्द्र र प्रदेशको चुनाब भएर हाम्रो चुनाब भएकोले समस्याको समाधान हुन्थ्यो अहिले समस्या मात्रै छ ।’ उनले गाउँपालिकामा शिक्षाको विकास गर्न हरेक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई विभिन्न खालका तालीमहरु प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको बताए । त्यस्तै गाउँपालिका भित्र क्रियाशिल गैससहरुलाई क्लस्टर बनाएर काममा लगाएको बताए ।
भूकम्प पिडितको घर बनाउन १० लाख रुपैँयाको कोष खडा गरेर पुननिर्माणलाई गति दिएको आरुघाट गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने गरी सबै वडामा सडक खनिएको छ । आरुघाट गाउँपालिकाले अन्य स्थानीय तहले गर्न नसकेको करार शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गरी सकेको गाउँपालिका प्रमुख पूर्ण दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले करार शिक्षक नियुक्ति कार्यविधी बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ’ उनले भने ‘नाइनल जन्य खादा तथा प्लास्टिकका गिलास मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ । सबै विद्यालयका कक्षा १ बाट अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन । २ वर्ष भित्र सबै घरमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाले पर्यटन विकास र विस्तार गर्न चार वडा करिडोर घोषणा गरी काम सुरु गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार आरुघाट(धार्चे रुविनाला(मनासलु करिडोर, आर्खेत हुँदै धार्चे(रुविनाला( मनासलु करिडोर, त्यस्तै मान्बु गणेश हिमाल करिडो र सोती मान्बु काशीँगाउँ केरौँजा दोभान मनासलु करिडोर घोषणा गरी पुर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने योजनामा गाउँपालिका रहेको छ ।
जिल्लाकै सबै भन्दा विवादित गाउँपालिका भीमसेन थापा गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा राजनिति हुँदा यो गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काममा गति लिन सकेको छैन । एक वर्षको अबधिमा पाँच जना कार्यकारी समेत परिवर्तन भइसकेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले चुनाबको बेलाको घोषणा पत्र एक वर्षमा पुरा हुने खालको नभई पाँच वर्ष भित्र पुरा हुने खालको भएकोले रिजल्ट नआएको बताए ।
‘केही विकासका भएका छन्’ उनले भने ‘कार्यपालिकाको विवादको कारणले समस्या भएको हो अब त्यो समस्या हट्यो । हाम्रोमा विकासका कामहरु कर्मचारी अभावले पनि हुन सकेनन् । घोषणा पत्रमा हामीले पाँच वर्षे कुरा राखेका छौँ । सडक, खानेपानी, बत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा थिए । सोही अनुसार काम भइरहेको छ ।’
धार्चे गाउँपालिका प्रमुख सन्त बहादुर गुरुङले एक वर्षको अबधीमा गाउँपालिकाका हरेक वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम भइरहेको बताए । उनले काशीगाउँ, केरौँजा लगायतका ठाउँमा जेठ महिनाको अन्तिम सम्म सडक पुग्ने बताए । उनले स्वास्थ्य उपचारको लागि सहजहोस् भनेर एम्बुलेन्सको ब्यवस्था गरिएको बताए । ‘एम्बुलेन्स खरिद गरेर हाम्रो माथिल्लो ठाउँमा गुड्ने खालको बनाउन लागेका छौँ’ उनले भने ‘शिक्षाको हकमा विद्यार्थीहरु नभएका विद्यालय मर्ज गरियो । मेघा कलेजको बारेमा छलफल चलिरहेको छ । पर्यप्रबर्धनको काम भइरहेको छ । गाउँलेले गाउँमै सेवा पाएको छ ।’
गण्डकी गाउँपालिकाले एक वर्षको अबधीमा सबै भन्दा प्रगती भएको सडकको ट्रयाक खोल्ने कामलाई मानेको छ । ‘विकासको पहिलो खुड्किलो नै सडक रहेछ’ गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर रानाले भने ‘हामीले यो वर्ष धेरै भन्दा धेरै सडकको टूयाक खोलियो । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले अनिवार्य आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्न लगाइयो । गाउँमा भएका विद्युतका काठेपोल विस्थापित गर्न लागेका छौँ ।’
चुमनुब्रीको फोन उठेन
यता चुमनुब्री गाउँपालिका प्रमुख धनबहादुर गुरुङले भने दरौँदी दैनिकको फोन उठाएनन् ।